Icon an-tsoratra kanto sy mpamorona bokotra ho an'ny Mac sy PC | Famoronana an-tserasera
Araceli lauret | | Cartoon vector
Trano lahatsoratra an-trano
Hatramin'ny nandefasako ny Art Text tamin'ny Mac mihoatra ny 7 taona lasa izay dia iray amin'ireo fitaovana nampiasako indrindra tamin'ny naha matihanina ahy hamahana bokotra impromptu, sary masina ary logo ho an'ny tranonkala eo ambany fananganana na ny katalaogim-panadihadiana. Fampiharana tena tsotra izy io, mora ampiasaina ary azo atao maro. Ny kinova maimaimpoana dia mihoatra noho ny ampy hanamboarana logo na bokotra haingana araka izay itiavanao azy, ary koa ny sary sy ny vohikala tsotra azonao tahirizina ho rakitra png tsy misy ambadika na mangarahara. Ary mazava ho azy fa misy amin'ny PC ihany koa io.
Amin'ny fisehoany, ny Art Text dia manome antsika varavarankely fiasa sy menio tsotsotra izay rehefa mivezivezy ianao dia manome safidy bebe kokoa anao, toy ny lisitry ny endritsoratra lava sy menus maromaro an'ny kisary na tarehimarika efa noforonina namboarina araka ny lohahevitra. Izy io dia miasa amin'ny sosona miaraka amin'ny interface graphique tena tsotra sy azo zahana.
Ohatra Art Text
Fa ny tena mahavariana dia ny karazan-dahatsoratra mivaingana azo ovaina, amin'ny matte sy gloss, miaraka amin'ny fahafaha-mamorona gradients (defaultinidos fa izay azo anaovana fiovana) ary miaraka amin'ny jiro azo ovaina mba hanahafana ny famirapiratana. Misaotra an'ireo firafitra ireo Azo atao ny mamorona sombin-javatra amin'ny 3d diso miaraka amin'ny fanamaivanana izay azo ovaina ihany koa amin'ny endrika sy ny ambaratonga.
Rindrambaiko fiasa Art Text
manome menio misy maodely amin'ny marika ampiasaina, bokotra, kisary ary marika badges, Ilaina tokoa ho an'ireo izay tsy mitady afa-tsy bokotra misy famirapiratana hampiasaina, na sary famantarana ho an'ny horonan-tsary, mail, telefaona, sns. Omeo fotsiny ny habeny tadiavina amin'ny piksel ary ampitao ny rakitra.
Fa araka ny nolazaiko tany am-piandohana dia fampiharana izany manolotra vahaolana haingana sy azo ampiharina, ho fitaovana ho an'ny matihanina. Etsy ankilany, ny asa tsy dia mitaky asa loatra dia afaka mahita ao amin'ny Art Text ilay fitaovana voafaritra, toy ny tranga misy amin'ireo mpianatra sy mpampianatra izay mila maneho sary amin'ny sary masina na tarehimarika amin'ny fampisehoana point d'exploitation. Safidy tsara ihany koa ho an'ireo orinasa kely te hampiditra sary masina na marika efa voatondro mialoha ao amin'ny katalaoginy izy io, satria manana trano famakiam-boky misy endrika, izay azo ovaina ihany koa, ary raha manam-pahaizana, tsy mila fianarana alohan'ny hidiranao, miditra fotsiny ary manomboka miasa.
Azonao atao ny mijery ny lahatsoratra momba ny kanto ary misintona eto: Lahatsoratra an-tsary
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Cartoon vector » TEXT ART: Sary famantarana sy bokotra ho an'ny mpamorona miaraka amin'ny Mac sy PC
Mpamokatra sombin-tserasera, maimaim-poana ary miaraka amin'ny alpha!